डाइटिसियन - नारी
मोटोपन नियन्त्रणका लागि कस्तो खाना खाने ? यस्तो छ डाइटिसियनको सुझाव
मौसमी रंगीबिरंगी फलफूल दैनिक २,३ पटक खाने बानी बसाल्नाले यसमा पाइने रेशाले भोक ढिला लगाउनुका साथै पेट भरी भएको महसुस गराउँछ । जसकारण तौल नियन्त्रणमा मद्दत पुग्दछ । दैनिक २१ देखि ३५ ग्राम रेशा (फाइबर) शरीरलाई आवश्यक पर्दछ ।
विपीन कार्की, डाइटिसियनवैशाख २६, २०७७
मोटोपन हुन नदिन
मोटोपन भएकाको लागि छुट्टै खाना भन्ने हुँदैन । शरीरको तौल अनुसार क्यालोरी, प्रोटिन, फ्याट जस्ता सबै तत्व मिलाएर खानुपर्छ । कार्बोहाइड्रेट अन्नहरु (चामल, धान, मकै, जौ, कोदो), तरकारी (आलु, पिंडालु, सखरखण्ड) आदिमा पाइन्छ । प्रोटिन धेरै प्रकारका एमिनो एसिड नामक सरल अणुहरुबाट बनेको हुन्छ ।
संगीता लामिछाने, डाइटिसियनवैशाख ८, २०७७
कसरी बढाउने रोग प्रतिरोधी क्षमता ?
हड्डीको रसमा एमिनो एसिड ग्लुटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जसले शरीरका कोशिकालाई मर्मत गर्नुका साथै प्रतिरक्षा प्रणाली दृढ बनाउँछ । च्याउमा पाइने बिटा–ग्लुकोन तत्वले कुनैपनि प्रकारका संक्रमणसँग जुध्न तयार गर्दछ ।
विपीन कार्की, डाइटिसियनचैत्र १९, २०७६
मधुमेह रोगीले के खाने
मधुमेह दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या भएकाले यो पूर्णरूपमा निको हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । पोषणसँग सम्बन्धित रोग भएकाले खानाका साथै शारीरिक क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्छ ।
संगीता लामिछाने, डाइटिसियनफाल्गुन १६, २०७६
आवश्यकताभन्दा बढी खानेकुरा खाँदा अपच हुन्छ । परिणाम बान्ता हुने, झाडापखाला लाग्ने समस्या देखापर्छ भने निस्क्रिय जीवन बिताउँदा विभिन्न रोगले आक्रमण गर्न सक्छ । बसेर खाने मात्र क्रममा आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । खानपिनका साथै शारीरिक व्यायामलाई पनि निरन्तरता दिए स्वस्थ रहन सकिन्छ ।
संगीता लामिछाने, डाइटिसियनआश्विन १३, २०७६
 सबै किसिमका दाल तथा गेडागुडी अर्थात् प्रोटिनयुक्त खाना खानुपर्छ ।  हरिया सागपात तथा सबै किसिमका तरकारी पनि शरीरका लागि लाभदायक हुन्छन् ।
शान्ता अस्थानी, डाइटिसियनअसार २, २०७६